Hetsika tsy nahazoana alàlana tany amin’ny fiantsonan’ny metro tao Hong Kong, niafara tamin’ny fanafihan’ireo polisy mpandrava korontana tamin’ny alalan’ny langilangy sy tsifotra misy dipoavatra · Global Voices teny Malagasy
'Ianao no nampianatra ahy fa tsy ilaina ny diabe am-pilaminana.'
Voadika ny 06 Oktobra 2019 6:11 GMT
‘Ianao no nampianatra ahy fa tsy misy ilàna azy ny diabe am-pilaminana.’ Sary: May James/HKFP.
Famintinana andian-dahatsoratra maro ity lahatsoratra ity – Miparitaka manerana an'i Hong Kong ny herisetra satria ‘nanao tifitra fampitandremana’ ny polisy tamin'ny 1 Septambra ary ny HKFP Lens: manasazy amin'ny alalan'ny basirano, entona mahalatsa-dranomaso ny polisin'i Hong Kong raha toa kosa nanipy cocktail Molotov tao amin'ny biraon'ny governemanta ireo mpanao fihetsiketsehana ary mitifitra rano miloko manga ny kamiaon-dranon'ny polisin'i Hong Kong fa manafika ny biraon'ny governemanta ireo mpanao fihetsiketsehana – navoakan'ny Hong Kong Free Press teo anelanelan'ny 31 Aogositra sy ny 1 Septambra 2019. Naverina navoaka teto amin'ny Global Voices noho ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Nipoaka nanerana an'i Hong Kong ny fifanandrinana mahery setra taorian'ny nihantsian'ireo olona an'arivony maro ny fandraràna nataon'ny polisy sy nivoriany tsy “nahazo alàlana” tamin'ny faran'ny herinandron'ny 31 Aogositra 2019.
Ny Mandatehezan'ny Zo Sivily no nanomboka ity famoriambahoaka ity mba hamerenana ireo fitakian'ny hetsika fanentanana miady amin'ny fanolorana olo-meloka sy mba hiampangàna ny fitsabahan'i Beijing ao anatin'ny fanavaozana ara-politikan'i Hong Kong. Zava-dehibe izany daty izany satria manamarika ny fitsingerenan'ny faha-5 taonan'ny fanapahankevitry ny Kaomity Maharitra an'ny Kaogresim-bahoaka Nasionaly izay nikendry ny fametrahana fitaovana fanivanana ho an'ireo fifidianana izay ho lehiben'ny mpanatanteraka ao Hong Kong amin'ny ho avy.
‘Diabe fivavahana ho an'ireo mpanota’
Taorian'ny nandavan'ny polisy ny hamoaka fanomezana alalana, na voatery aza ny CHRF hanajanona ilay diabe nokarakaraina tamin'ny fomba ofisialy, nihantsy izany fandraràn'ny polisy izany ny olona an'arivony ary nivondrona tao Southorn Playground any Wan Chai mba hanao “diabe fivavahana ho an'ireo mpanota” .
Nanambara tamin'ny HKFP i Christopher Yeung, tanora katôlika iray izay nitarika ilay diabe, fa tsy hetsipanoherana ilay diabe fa fivoriana ara-pivavahana. Araka ny didy fanapahana Fitantanana ny Filaminam-bahoaka, tsy mila ny fanomezan-dalan'ny polisy ny hetsika ara-pivavahana raha latsaky ny 30 ireo mpandray anjara.
Saingy olona an'aliny no nipoitra tao Southorn Playground ary nankany amin'ny birao foiben'ny polisy tany am-piandohan'ny tolakandro, avy eo nankany Admiralty sy Central. Nihanitombo ireo olona niaraka taminy, izay niteraka ny fitsaharan'ny fifamoivoizana teny amin'ireo lalambe nampitohy an'i Causeway Bay sy Central. Nanangana faneva mavo ireo polisy tany amin'ny toerana maro mba hampitandremana ireo vahoaka marobe hoe mandika lalàna izy ireo ary mety ho henjehana. Fa mbola nanohy ny diabeny teny an-dalana ihany ny olona.
Herisetra mihoa-pampana: kibay sy tsifotra dipoavatra tao anaty fiaran'ny metro
Tafondron-drano miaraka amin'ny rano miloko mba hahafantarana ireo mpanao fihetsiketsehana. Sary: May James/HKFP.
Tany amin'ny manodidina ny 05h30 hariva tany no niala ny ankamaroan'ireo mpanao fihetsiketsehana ary nipoaka ny fifanandrinana mahery setra raha toa ka niezaka ny hanafika ny Filankevitry ny Antenimiera mpanao lalàna ireo mpanao fihetsiketsehana hiringiriny. Nandefa entona mahalatsa-dranomaso ny polisy mpandrava korontana no sady nandefa basirano raha toa ka nanipy zavatra ho amin'ny laharan'ny polisy kosa ireo mpanao fihetsiketsehana, indrindra fa cocktail Molotov.
Ilay fipoahan-javatra tamin'ny Sabotsy dia nitranga iray andro taorian'ireo fisamborana faobe natao an'ireo mpikatroka sy olomalaza amin'ny politika noho ireo fandikandalàna nifandray tamin'ny fitarihana, fikarakarana na fandraisana anjara tamina fivoriana tsy nahazoana alalàna. Nahitana ny solombavambahoaka mpandàla ny demaokrasia Cheng Chung-tai, Au Nok-hin sy i Jeremy Tam, ary hatramin'ireo mpikatroka Joshua Wong, Agnes Chow sy Andy Chan, mpamorona ilay antoko voarara mpandala ny fahaleovantena ao Hong Kong, teo anivon'ireo olona tafavory teo.
Rehefa tonga ny alina, nandroso tamin'ny làlana Hennessy Road ny polisy mpandrava korontana. Teo akaikin'ny birao foiben'ny polisy, nanao afo niredareda ireo mpanao fihetsiketsehana, izay matin'ny borigadin'ny mpamono afo ihany nony farany.
Afobe natao teo akaikin'ny birao foiben'ny polisy. Sary:May James/HKFP.
Teo amin'ny manodidina ny 9:30 alina teo, nanomboka nisambotra ireo mpanao fihetsiketsehana ny polisy. Nisy polisy nifitafy toy ny sivily nanao tifitra roa fampitandremana, satria vitsy an'isa noho ireo mpanao fihetsiketsehana ry zareo rehefa niezaka ny hanao fisamborana tao Causeway Bay.
Raha niparitaka ireo mpanao fihetsiketsehana, niparitaka nanerana ny distrikan'i Yau Tsim Mong ao Kowloon ny herisetra,raha nanaparitaka entona mahalatsa-dranomaso tany Prince Edward ny polisy. Nipoaka ihany koa ny fifandonana tany Kwun Tong sy Lam Tin.
Taorian'ny nahazoana ny tatitry ny MTR mikasika ny fifandonana iray tany anaty fiarandalamby, mpandeha teo amin'ny 3 na 4 teo no nanakana ireo mpanao fihetsiketsehana tsy hiditra tao anatin'ilay fiara tamin'ny alalan'ny barà vy sy tantanana (maritoa) iray, raha ireo mpanao fihetsiketsehana kosa indray niaro tena tamin'ny alalan'ny elo sy famonoana afo. Avy eo, tonga teny an-toerana tao Mong Kok sy Prince Edwards MTR ny polisy mpandrava korontana mba hanao fisamborana.
Nasehon'ny tatitra amin'ny fahitalavitra sasany ireo polisy mpandrava korontana midaroka olona amin'ny langilangy tany anatin'ireo fiarandalambian'ny garan'ny Prince Edward ary nandefa tsifotra dipoavatra. Maro ireo mpandeha toa nivarahontsana sy nivoa-drà.
Tao anatin'ny fanambarana iray, nilaza ny governemanta fa nandroba tany amin'ireo toby ary nanafika ny vahoaka mpijery ireo mpanao fihetsiketsehana, ary hoe niditra tany amin'ny fantsonan'ny MTR ny polisy sasany mba “hampitsahatra ireo hetsika mahery setra sy koa hisamborana ireo mpandika lalàna.”
Na izany aza, asehon'ny andian-dahatsary sasany fa nidaroka olona tsy nanao fihetsika mahery setra ireo polisy mpandrava korontana. Nofaritan'ny Filoha lefitry ny Antoko Demokraty Lo Kin Hei ireo herisetra nataon'ny polisy ireo tany amin'ny metro ho toy ny dika ara-dalàna amin'ilay fanafihana vahoaka tamin'ny 21 Jolay tany Yuen Long :
— LO Kin-hei 羅健熙 (@lokinhei) 31 Aogositra 2019
Ilay sehatra mahatsiravina tany amin'ny Garan'i Prince Edward izay nibosesehan'ny polisy tao anatin'ilay fiarandalamby MTR ary nidarohan'izy ireo izay rehetra tao nefa tena tsy nisy marika fanimbàna na fihantsiana. Toy ilay Fanafihana ny Yuen Long tamin'nyh 27 Jolay nataon'ny olona. pic.twitter.com/nTfBb1ehG4
Nitatitra ireo manampahefana tao amin'ny hopitaly fa olona 41 no niditra hopitaly ary 5 no naratra mafy nandritra ireo fifanandrinana niseho tamin'ny faran'ny herinandro.
Raha hamaky misimisy kokoa momba ireo hetsipanoherana ao Hong Kong anoherana ilay lalàna fanolorana olomeloka, vangio ny pejy fandrakofana manokana ato amin'ny Global Voices